Semalt Expert: Indreto ny fomba hijerena ny fitohanana finday
Ireo profesora profilan'i Google Analytics dia mahasoa amin'ny fomba maro. Ny tombontsoa voalohany sy lehibe indrindra dia ny ahafahantsika mampiditra na manafoana ny angon-drakitra avy amin'ny tatitra izay mifototra amin'ny fepetra takiantsika sy ny karazan-tariby.
Azonao atao ny mijery na manafoana ny angona avy amin'ny fifamoivoizana finday, sehatra voafaritra manokana na toerana manokana. Oliver King, manam-pahaizana manerantany avy amin'ny Semalt , dia manome toky fa afaka manatanteraka mora foana ny kaonty Google Analytics ireo zavatra rehetra ireo.
Ny sivana profil of Google dia azo faritana ho sivana manokana izay ampiasaina hanovana na hamerana ny angon-drakitra ao amin'ny tontolon'ny Google Analytics. Noho izany, mety ho azonao atao ny manova ny angon-drakitrao ary miantoka ny fiarovana sy ny fahatokisana ny tranokalanao ao amin'ny aterineto - camisas dos caballos.
Raha lazaina amin'ny teny hafa, azontsika atao ny milaza fa ny filaharan'ireo profilan'i Google Analytics dia afaka manampy amin'ny famoronana andian-tatitra izay mampiseho ny marina sy ny fampahafantarana azo antoka momba ny loharanom-pejy sy ny adiresy IP momba ny fifamoivoizana. Na azonao avy amin'ny ordinatera manokana na ny fitaovana finday ianao, ny solosaina profilo dia hanome anao ny fampahalalana azo antoka. Azo atao ny mampihatra ny filaharan'ireo profil of Google Analytics amin'ny toe-javatra samihafa raha vao nahavita nanangana azy ireo ianao.
Dingana 1 - Tokony hanana mari-pamantarana
Ny dingana voalohany dia ny fananana mombamomba ny mombamomba anao alohan'ny hanombohana. Raha mbola tsy namorona io profil io ianao dia tsy ho azonao mihitsy hoe aiza ny fifamoivoizan'ny tranonkala. Ny profil master anao dia ahitana ny fampahalalana rehetra momba ny fifamoivoizan'ny tranonkala sy ny toerana handaniana ny ankamaroan'ny fotoana. Raha efa nampiasa ny Google Analytics nandritra ny fotoana lava ianao, fotoana izao hanaraha-maso ny asan'ny tranonkalanao amin'ny famoronana profil master. Hanangana sy hanome vokatra tsara ho anao.
Dingana 2- Manangana sehatra vaovao
Raha ny marina, tsy namorona profil ianao. Eto izahay dia hanoro anao ny fomba hanamboarana avy hatrany ny filtre filtre. Kitiho ny fizotry ny Admin ao amin'ny kaonty Google Analytics ary mifidiana ny takelaka Profiles, ary araho amin'ny alàlan'ny fikitihana ny New Profile icon mba hanombohana azy.
Dingana 3 - Mamolavola sivana filokana
Rehefa avy namorona profil iray ianao ary nanatanteraka ny fizarana rehetra dia ny dingana manaraka dia ny manindry ny icon-n'ny mpampiasa Mobile ary mamorona ny sivana amin'ny alàlan'ny tsindrio amin'ny fizarana Filtres. Eto ianao dia afaka mamorona karazana filirara mifototra amin'ny fepetra takinao ary manomboka manombana ny fifamoivoizana amin'ny tranokala sy ny kalitaony.
Google Analytics fandefasana sary nalaina amin'ny finday
Tokony ho telo taona lasa izay, dia maro ny fifamoivoizana nitsidika ny bilaogy Crazy Egg tamin'ny alalan'ny fitaovana finday. Ny zavatra mampanahy indrindra dia ny enina isan-jaton'ny mpanjifany mailaka no nitsidika ny tranonkala tamin'ny fampiasana ny findainy. Ankoatra izany, nivezivezy betsaka tamin'ny finday toy ny fialan-tsasatra sy fotoana teo amin'ny toerana ny finday. Midika izany fa olona maro no nitsidika ilay tranonkala, saingy nandany segondra vitsy monja tao amin'ny tranonkala. Noho izany, nalefan'ny orinasa nanavao sy namerina ny sivana filôzôfian'i Google Analytics mba hahazoana antoka ny fahitana azy sy ny fitokisana amin'ny aterineto. Ny tetikasa WordPress vaovao dia mamolavola mba hahazoana antoka fa hahazo ny vokatra tsara ny mpampiasa.